Musharixiinta siyaasadeed waxay $ 2,900 ka heli doonaan xayeysiis lacag la’aan ah FreeSpace Social, Inc.
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Musharixiinta siyaasadeed waxay $ 2,900 ka heli doonaan xayeysiis lacag la’aan ah FreeSpace Social, Inc.
FreeSpace Social waxay ku dhawaaqaysaa inay ku deeqi doonaan $ 2,900 xayeysiis lacag la’aan ah musharrax kasta oo siyaasadeed oo federaal ah oo lagu dhawaaqo oo ku soo biira madasha, oo ah tabarucaad nooc-nooc ah, xisbiguu doono ha ahaadee.
Musharraxiinta siyaasadeed waxay mudan yihiin fursad kasta oo la heli karo si ay farriintooda ugu gudbiyaan dadweynaha guud iyada oo aan la haysan xeerar adag oo ku saabsan xayeysiiska siyaasadeed ee la xiriira shabakadaha bulshada ee caadiga ah. FreeSpace wuxuu quseeyaa si dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah, laakiin laalitaannada koontada ayaa loo dhaqan geliyaa nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha xunxun ama aan habboonayn. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu waxay muujineysaa mowqif oggolaansho ka badan kuwa dhiggooda ah ee Big Tech marka ay timaaddo xayaysiinta, gaar ahaan caafimaadka beddelka ah, kooxaha diinta, ururrada dadka ka ganacsada, iyo ololaha siyaasadeed ee labada dhinac.
Musharixiinta la iclaamiyay ee raba inay ka qaybqaataan dalabka xayaysiinta ee FreeSpace waxaa laga rabaa inay soo gudbiyaan nuqul foomka caddeynta FEC si ay ugu qalmaan. Musharixiinta la iclaamiyey waxay sidoo kale lahaan doonaan astaantooda FreeSpace isla markaaba la xaqiijiyo markay helaan oo oggolaadaan foomka FEC.
"Waxaan soo dhaweynaynaa musharraxiinta ka kala socda dhammaan dhinacyada siyaasadda si ay uga faa'iideystaan ​​dalabkan dhif ah ee xayeysiinta bilaashka ah ee madalkeenna," ayuu yiri Maamulaha FreeSpace, Jon Willis. "Rajadayadu waxay tani u oggolaan doontaa dadweyne xog-ogaal u ah musharrixiinta la jaan qaada qiyamka beelahooda."
Diyaaradaha xambaara ee Maraykanka ayaa lagu arkay saxaraha Shiinaha